Broadband အင်တာနက် | Telenor Myanmar
Prepaid မှ Postpaid ပြောင်းလဲခြင်း
IP အကူးအပြောင်း ဝန်ဆောင်မှု
Session Initiation Protocol ဝန်ဆောင်မှု
broadband ရဲ့ အားသာချက်တွေနဲ့ အင်တာနက်သုံးကြမယ်။
တယ်လီနော Broadband မှတစ်ဆင့် iflix ကို အကန့်အသတ်မရှိ အသုံးပြုပြီး သင့်ရဲ့ စမတ် device များပေါ်တွင် အကောင်းမွန်ဆုံး ပြည်တွင်းပြည်ပ ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
တယ်လီနော Broadband မှတစ်ဆင့် iflix ကို အကန့်အသတ်မဲ့ အသုံးပြုပြီးအမိုက်ဆုံး ဗီဒီယိုများ နှင့် TV အစီအစဉ်များ ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Ultimate Spider-Man: Just Thwip It
သင့်စိတ်ကြိုက် ခံစားနိုင်မယ့် ဖျော်ဖြေမှု
ပုံသေနှုန်းထားဖြင့် အင်တာနက် ကန့်သတ်မဲ့သုံးခွင့်
နှစ်သက်ရာ Plan ကို ရွေးချယ်ပြီး အင်တာနက် အကန့်သတ်မဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်ဖြင့် ဖုန်းခေါ်တာ ဗီဒီယိုကြည့်တာ၊ အခြားဒေတာသုံးစွဲတာ၊ လိုချင်တာတွေ download လုပ်တာ နှစ်သက်ရာကို ဒေတာကုန်သွားမှာ စိတ်ပူစရာမလိုပဲ အကန့်သတ်မဲ့ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာလုံး လိုင်းတည်ငြိမ်သော အချိန်ပြည့်မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်
မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ကို တသမတ်တည်း အချိန်ပြည့် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုကြောင့် မိမိသုံးစွဲနေတဲ့ အင်တာနက်လိုင်းကို မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်သွားချိန်မှာလည်း အင်တာနက်လိုင်းကို သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်သုံးနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများစွာ တစ်ချိန်တည်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှု
အင်တာနက်လိုင်းတခုတည်းနဲ့ မိသားစုဝင်အားလုံး ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက် သုံးစွဲမှု၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းများကိုပါ သုံးစွဲသူများစွာ တပြိုင်နက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
သင်နှင့် အသင့်တော်ဆုံးအစီအစဉ်များကို ရယူလိုက်ပါ။
အသင့်အတင့်မှ တခါတရံ အများအပြားအင်တာနက် သုံးစွဲမှု၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းများ
ပုံမှန် အများအပြားအင်တာနက် သုံးစွဲမှု၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းများ
အများအပြားအင်တာနက် သုံးစွဲမှု၊ ဒေါင်းလုတ်ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းများ
Broadband အသုံးပြုခပေးသွင်းထားသော သူများသာ iflix ကို အကန့်အသတ်မရှိသုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Broadband အသုံးပြုသူများ အနေဖြင့် အသုံးပြုခပေးသွင်းခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါက iflix အသုံးပြုခပေးဆောင်ရမှာဖြစ် Broadband အသုံးပြုခကို ပြန်လည်ပေးသွင်းပါက iflix ကို အကန့်အသတ်မရှိပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ပြိုင်တည်း အသုံးပြုနိုင်သူ အရေအတွက်မှာ ၅ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
Broadband ၂ Mps နှင့် ၆ Mbps ကိုအသုံးပြုနေတဲ့ သူများအတွက်ကတော့ iflix ကို အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုလိုလျှင် အထက်ပါ အစီအစဉ်သစ်များကို ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
ငွေပေးချေရန် နည်းလမ်းများ ရွေးချယ်ရန်
Wave Money မှ ငွေပေးချေခြင်း
Telenor Broadband အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် လူကြီးမင်း (သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူ)နှုင့် မြန်မာ့ဥပဒေများနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်၍ မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၃၈၇၊ FC ၂၀၁၃/၂၀၁၅) ဖြင့် အမှတ် (၄၀)၊ စက်မှု(၁)လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့လိပ်စာဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားရှိသော Telenor Myanmar Ltd.(သို့မဟုတ် Telenor )တို့ကြားတွင် တရားဝင်အတည်ဖြစ်၍ လိုက်နာရန်လိုအပ်သည့် သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။
Telenor မြန်နှုန်းမြင့် Broadbandအင်တာနက်၏ တရားမျှတစွာ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ
တရားမျှတစွာ အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ ("မူဝါဒ") သည် Telenor နှင့် Telenor မြန်နှုန်းမြင့် Broadband ( နှစ်ခုစလုံးကို "Telenor" ဟုရည်ညွှန်းသုံးနှုန်းမည်) နှင့် Telenor Broadband မြန်နှုန်းမြင့် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများ ကို သုံးစွဲနေကြသည့် ၄င်းတို့၏ သုံးစွဲသည့် customerသူများကြားတွင် အတိုင်းအတာအားဖြင့် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည့် ကျင့်ဝတ်များကို ချမှတ်ပေးပါသည်။ အင်တာနက်သုံးစွဲသူများအားလုံးသည် မိမိတို့၏အင်တာနက်သုံးစွဲမှု နှင့် ထိုသုံးစွဲမှုသည် တစ်ပါးသော သုံးစွဲသူများအပေါ်တွင်မည်သို့မျှ သက်ရောက်ထိခိုက်မှုမရှိအောင် တာဝန်သိသိ၊ တာဝန်ရှိရှိ နှင့် တာဝန်ခံယူလိုစိတ်အပြည့်ဖြင့် သုံးစွဲကြလိမ့်မည်ဟု Telenorက ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
Broadband ဘေလ်ပေးဆောင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်
Broadband အင်တာနက် ဝယ်ယူရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မီး ပျက် သွား သော အ ချိန် ၌ လည်း အင် တာ နက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သ လား?
Telenor Broadband တွင် Power Backup Plan ပါ ဝင် ပြီး၊ ၎င်း သည် အင် တာ နက် ကို (၈) နာ ရီ အ ထိ အ သုံး ပြု နိုင် အောင် ထောက် ပံ့ ပေး ပါ သည်။ ( အိမ် တွင် လျှပ် စစ် မီး ရ ရန် လို အပ် သော ပ စ္စည်း များ ရှိ ရ မည် မှာ customer ၏ တာ ဝန် သာ ဖြစ် ပါ သည်။)
Telenor Broadband ကို အ သုံး ပြု ပြီး မည် သည့် ပ မာ ဏ ထိ အင် တာ နက် အ သုံး ပြု နိုင် သ နည်း?
“ သင် လို အပ် သ လောက် အင် တာ နက် ကို အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သည်” Telenor Broadband နှင့် အ တူ သင် ရွေး ချယ် ထား သော မြန် နှုန်း ဖြင့် အင် တာ နက် ကို သင် ကြိုက် သ လောက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သည်။
Customer များ အား လုံး Wifi router ရ ရှိ မည် ဖြစ် ပြီး၊ ၎င်း နှင့် အ တူ mobile ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ ကွန် ပြူ တာ ( သို့) အ ခြားdevice များ သို့ ကြိုး ဖြင့် ချိတ် ဆက် ကာ အင် တာ နက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သည်။ ပါ သည်။)
Users အ များ ကြီး တစ် ပြိုင် နက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သ လား?
အ သုံး ပြု နိုင် ပါ တယ်။ Telenor Broadband ဝန် ဆောင် မှု များ ကို မြန် နှုန်း အ မျိုး မျိုး ကို ဈေး နှုန်း အ မျိုး မျိုး ဖြင့် ရ ၌ ရှိ နိုင် ပါ သည်။ ဝန် ဆောင် မှု များ အ တွက် ဈေး နှုန်း အ မျိုး မျိုး ရှိ သော plan ပေါ် မူ တည် ပြီး အ သုံး ပြု နိုင် သော user အ ရေ အ တွက် ကွာ ခြား လိမ့် မည်။
Telenor Broadband သည် အ ခြား သူ များ ထက် ပို ဈေး ကြီး ပါ သ လား?
ဈေး မ ကြီး ပါ၊ Telenor Broadband ဝန် ဆောင် မှု များ ၏ ဈေး နှုန်း များ မှာ ဈေး ကွက် အ တွင်း ပြိုင် ဘက် များ ထက် ၅ ဆ မှ၁၀ ဆ ထိ နည်း ပါ သည်။
ဝန် ဆောင် မှု အ တွက် နှစ် စဉ် ကြေး ပေး ဆောင် ဖို့ လို ပါ သ လား?
Telenor Broadband ဝန် ဆောင် မှု များ အ တွက် နှစ် စဉ် ကြေး ပေး ဆောင် ရန် မ လို ပါ။
တယ် လီ နော မြန် မာ သည် မည် သည့် အ မျိုး အ စား broadband ဝန် ဆောင် မှု များ ကို ပေး လျက် ရှိသ လဲ?
တယ် လီ နော မြန် မာ သည် သင့် တင့် မျှ တ သော ဈေး နှုန်း၊ စိုး ရိမ် ပူ ပန် မှု ကင်း သော၊ အ နာ ဂတ် နည်း ပ ညာ များ ကို အ သုံး ပြု ရန် အ သင့် ရှိ နေ သော broadband ဝန် ဆောင် မှု ကို ပေး နေ ပါ သည်။
အ နာ ဂတ် နည်း ပ ညာ များ ကို အ သုံး ပြု ရန် အ သင့် ရှိ သ ကဲ့ သို့ Telenor Broadband သည် မြင့် မား သောquality နှင့် ဝန် ဆောင် မှု အ တွက် မည် ကဲ့ သို့ အာ မ ခံ ပါ သ နည်း။
Telenor Broadband ကို (၁) ဂီ ဂါ ဘစ် အ ထိ မြန် နှုန်း ပေး နိုင် သော fiber ဆက် သွယ် မှု ကို တပ် ဆင် ထား မည် ဖြစ် သည်။ ထို့ ကြောင့် quality နှင့် မြန် နှုန်း ကို Online ပေါ် တွင် တိုက် ရိုက် ဂိမ်း က စား နိုင် သော၊ TV နှင့် ရုပ် ရှင် များ တိုက် ရိုက် ကြည့် ရှု နိုင် သည် အ ထိ ပေး နိုင် ကြောင်း အာ မ ခံ ပါ သည်။
အင် တာ နက် လိုင်း က ဘယ် လို မျိုး တည် ငြိမ် မှု ရှိ ပါ သ လဲ၊ 2Mbps နှင့် 4Mbps အ တွက် user ဘယ် လောက် များ များ အ သုံး ပြု နိုင် ရန် ထောက် ပံ့ ပေး ထား သ လဲ?
အင် တာ နက် လိုင်း က အ လွန် တည် ငြိမ် မှု ရှိ ပြီး router ဆီ သို့ ရောက် ရှိ သော မြန် နှုန်း မှာ လည်း အ မြဲ တမ်း တူ ညီ နေ ပါ လိမ့် မည်။ user အ များ ကြီး က router နှင့် ချိတ် ဆက် ပြီး အင် တာ နက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သည်၊ သို့ ရာ တွင် user အ များ ကြီး တ ပြိုင် နက် အ သုံး ပြု မှု သည် user တစ် ဦး ချင်း စီ အ တွက် အင် တာ နက် အ သုံး ပြု သည့် အ တွေ့ အ ကြုံ အ ပေါ် သက် ရောက် မှု ရှိ လိမ့် မည်။ ဖိုက် ဘာ အင် တာ နက် ဝန် ဆောင် မှု နှင့် ပတ် သက် ၍ အ တွေ့ အ ကြုံ ရ ရှိ ရန် သင် ကိုယ် တိုင် အ ခ မဲ့ အင် တာ နက်(၁) လ အ သုံး ပြု ခွင့် ကို စမ်း ကြည့် ပါ။
ကန့် သတ် မဲ့ အ သုံး ပြု နိင် သော plan မျိုး ဟုတ် ပါ သ လား?
ဟုတ် ပါ တယ်၊ ဒေ တာ ပ မာ ဏ အ ကန့် အ သတ် မဲ့ စိတ် ကြိုက် အ သုံး ပြု နိုင် ပါ သည်၊ သို.သော် အင် တာ နက် အား အ ခြား သူ များ သို့ share သုံး ခြင်း ( သို့) ပြန် ရောင်း ချ ခြင်း ကို လုံးဝ ခွင့် မ ပြု ပါ။
အင် တာ နက် လိုင်း ကျ သွား လျှင် ဆက် သွယ် မေး မြန်း ရန် customer service အား (၂၄/၇) ဝန် ဆောင် မှု ပေး ထား ပါ သ လား?
တယ်လီနော Broadband Call Center အား နေ့စဉ် မနက် ၇ နာရီ မှ ညနေ ၈ နာရီအတွင်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အ ကယ် ၍ အင် တာ နက် ချွတ် ယွင်း မှု အ ချိန် ကြာ လျှင် နစ် နာ မှု အား ပြန် လည် လျော် ပေး ရန် ရှိ ပါ သ လား? အ ချိန် ကြာ မြင့် စွာ အင် တာ နက် ချွတ် ယွင်း လျှင် customer များ အ တွ က် ဘာ ပြန် လုပ် ပေး မည် နည်း?
အ ကယ် ၍ အင် တာ နက် ချွတ် ယွင်း မှု ကြာ ချိန် သည် တစ် ပတ် ထက် ကျော် လွန် သွား လျှင် customer ၏ နစ် နာ မှု အား အ လျော် ပြန် ပေး ရန် အ စီ အ စဉ် ရှိ ပါ သည်။ အ ခ မဲ့ စမ်း သပ် အ သုံး ပြု ခွင့် ကာ လ အ ပြီး မှတ် ပုံ တင် ရ မည့် သုံး စွဲ သူ သ ဘော တူ ညီ မှု စာ ချုပ် တွင် အ သေး စိတ် ဖော် ပြ ထား ပါ မည်။
အ ခ မဲ့(၁) လ အ စမ်း အ သုံး ပြု ခွင့် ပြီး နောက် တပ် ဆင် ထား သော ကိ ရိ ယာ များ(router, ကေ ဘယ် ကြိုး) အ တွက် ငွေ ပေး ဖို့ လို ပါ သ လား?
အ စမ်း အ သုံး ပြု ခွင့် ကာ လ ပြီး နောက် custome သည် ဝန် ဆောင် မှု အ တွက် စ တင် ငွေ ပေး ဆောင် ရန် ရွေး ချယ် လိုက် ပြီ ဆို လျှင် router အ တွက် ငွေ ပေး စ ရာ မ လို ပါ။ customer သည် ဝန် ဆောင် မှု အ တွက် စ တင် ငွေ ပေး ဆောင် ရန် မ ရွေး ချယ် ဘူး ဆို လျှင် တယ် လီ နော သည် router အား ပြန် လည် သိမ်း ဆည်း မည် ဖြစ် သည်။
အခမဲ့(၁)လ အစမ်းအသုံးပြုခွင့်အတွက် မည်မျှမြန်နှုန်းရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိမည်နည်း။
6 Mbps မြန်နှုန်းရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို လူတိုင်းရရှိလိမ့်မည်။
ကျွနု်ပ်၏အိမ်၌ တပ်ဆင်ခွင့်ကိုခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင် ဘာတွေရနိုင်မည်နည်း။ ပိုင်ရှင်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့်ကဘာလဲ?
အကျိုးခံစားခွင့်အနေနှင့် ပိုင်ရှင်အပါအဝင် လူတိုင်း ရန်ကုန်မြို့၏နှစ်နေရာမှာသာရရှိနိုင်သော အငြင်းပွားစရာမရှိသော မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကို ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောဈေးဖြင့်သာ အသုံးပြုရန် အခွင့်အရေးရရှိလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့တပ်ဆင်ခွင့်ကို အထူးအခွင့်အရေးအနေနှင့် ခံစားရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်အိမ်ပြောင်းမည်ဆိုလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သနည်း။ အခြားနေရာသစ်၌ သင်၏broadbandဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
သင်၏အိမ်(သို့)တိုက်ခန်းသို့ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောကြောင့် ရွေ့ပြောင်းယူဆောင်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်ရွေ့ပြောင်းသောနေရာသစ်သည် တယ်လီနောမှ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ယူထားပြီးသားဆိုလျှင် ၄င်းမှတစ်ဆင့် သင်သည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်၍အသုံးမပြုဘူးဆိုလျှင် အဆုံးသတ်ခ (termination fee)ပေးဆောင်ရန်လိုပါသလား?
အဆုံးသတ်ခွင့်မတိုင်ခင် ဝန်ဆောင်မှုကို အနည်းဆုံးဘယ်လောက်အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ?
အခမဲ့စမ်းသပ်အသုံးပြုခွင့်သည် စတင်ရန်စာရင်းပေးလိုက်ခြင်းမှစ၍ တစ်လဖြစ်သည်။ ထို့နောက် customerသည် ဆက်၍ မပေးဆောင်လျှင် ဝန်ဆောင်မှုသည် အလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ customerသည် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် တစ်လချင်းစီစတင်ပေးဆောင်မည်ဆိုလျှင် ဝန်ဆောင်မှုသည် customerပုံမှန်လစဉ်ကြေးပေးဆောင်သည်အထိ အလုပ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။
ဘေလ်ကောက်ခံခြင်း မည်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်မည်နည်း (သို့) လစဉ်ပေးဆောင်ရမည့် ဘေလ်ကို သင်၏ရုံး၌ လာရောက်ပေးဆောင်ရမှာလား?
ယခုလောလောဆယ် Customerများအတွက် ဘေလ်ပေးဆာင်မှုအား Wave Money ဖြင့် ပေးဆောင်နိုင်ရန် စီစဉ်ပေးထားပါသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော နည်းလမ်းများမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ဘေလ်ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
နည်းလမ်း (၁) ။ ။ ‘Wave Money App’ကိုအသုံးပြု၍ သင်၏ wave account မှ တယ်လီနော Broadband wave account သို့ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း
နည်းလမ်း (၂) ။ ။ ‘Wave Money Shop’မှတဆင့် တယ်လီနော Broadband wave account သို့ ဘေလ်ပေးဆောင်ခြင်း
Postpaid (သို့) Prepaid?
ယခုလောလောဆယ်တော့ Prepaid ဝန်ဆောင်မှုပါ။
ဈေးနှုန်းသည် အခွန်ထည့်တွက်ပြီးသား ဟုတ်ပါသလား?
ကျွနု်ပ်တို့သည် whatsapp/viberအတွက်သာ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကန့်သတ်မဲ့အသုံးပြုခွင့်planကို လစဉ်ပုံမှန်ငွေသွင်းပြီး အသုံးပြုခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့အတွက် မသင့်တော်ပါ။ အသုံးပြုခွင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ကောက်ခံသည့် PAYG package မျိုး သင်တို့မှာရှိ
မီးပျက်သွားလျှင်လည်း အင်တာနက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသလား?
မီးပျက်သွားပြီး ၈နာရီအထိ နံရံမှာဖောက်ထားသော ပလတ်ပေါက်အထိ အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနေအုံးမည်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် wireless ဝန်ဆောင်မှုဆက်လက်အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် WiFiအသုံးပြုရန် တပ်ဆင်ထားသော routerကို UPSနှင့်ချိတ်ဆက်ထားရမည်မှာ customer၏တာဝန်သာဖြစ်သည်။
mobile dataအစား အိမ် ၌broadband serviceကို အသုံးပြုသင့် သလဲ?
ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်း၊ အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သော အင်တာနက် connection အတွေ့အကြုံရရှိရန် တစ်လလောက် အစမ်းသုံးကြည့်ပါ။
သင်၏ ဖိုက်ဘာအင်တာနက်သည် ကျွနု်ပ်တို့အသုံးပြုနေသော wifiနှင့် ဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားခြားနားသလဲ?
အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါတယ်၊ တယ်လီနော broadband သည် သင့်အတွက်သီးသန့်ဖြစ်သော မြန်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းပေးထားသည်၊ ကောင်းမွန်ဆုံးသောမြန်နှုန်းကို ရရှိနိုင်ရန် router/outlet မှ ကေဘယ်ကြိုးနှင့်ချိတ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် wifi မှ user မည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုလည်း သတ်မှတ်ထားနိုင်ပါသည်။ အကွာအဝေး ဝေးကွာမှုသည် အင်တာနက်ကွာလတီအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့် routerသည်သင်၏အနီးဆုံးနေရာတွင်ရှိနေရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။
တပ်ဆင်မှုကို ကျွနု်ပ်၏နေအိမ်၌ ဘယ်အချိန်လောက် စတင်မည်နည်း။
အခမဲ့စမ်းသပ်တပ်ဆင်ချိန်အတွင်း စာရင်းပေးသွင်းထားလျှင် စာရင်းပေးသွင်းချိန်မှစ၍ (၁)လအတွင်း စတင်တပ်ဆင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းနောက်မှ စာရင်းပေးသွင်းပြီး သင်၏အဆောက်အအုံ၌ Telenor Broadbandရှိပြီးသားဆိုလျှင် ၁၄ရက်အတွင်း လာရောက်တပ်ဆင်ပေးပါမည်။
သင်၏တိုက်ခန်းအတွင်း တပ်ဆင်မှုသည် ၁နာရီမှ၄နာရီကြား ကြာမြင့်လိမ့်မည်။
ကျွနု်ပ်၏အိမ်သည် အရမ်းဟောင်းနေပြီး အိမ်နံရံအား drillဖောက်ခြင်းကို မလုပ်ချင်ပါ။ drillမဖောက်ဘဲ တပ်ဆင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသလား?
တယ်လီနောသည် သင်၏နေအိမ်၌ တတ်နိုင်သမျှအနည်းဆုံးသက်ရောက်မှုသာရှိသည့် တပ်ဆင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။ drillမဖောက်ရဘူးဆိုလျှင် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနိုင်ရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို ကြိုးစားရှာဖွေ၍ တပ်ဆင်ပေးပါမည်။
မီး​ပျက်​သွား​သော ​အ​ချိန်​၌​လည်း ​အင်​တာ​နက်​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သ​လား?
Telenor Broadband​တွင် Power Backup Plan ​ပါ​ဝင်​ပြီး၊ ​၎င်း​သည် ​အင်​တာ​နက်​ကို (၈)​နာ​ရီ​အ​ထိ ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​အောင် ​ထောက်​ပံ့​ပေး​ပါ​သည်။ (​အိမ်​တွင်​လျှပ်​စစ်​မီး​ရ​ရန် ​လို​အပ်​သော ​ပ​စ္စည်း​များ​ရှိ​ရ​မည်​မှာ customer​၏​တာ​ဝန်​သာ ​ဖြစ်​ပါ​သည်။)
Telenor Broadband​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ပြီး ​မည်​သည့်​ပ​မာ​ဏ​ထိ ​အင်​တာ​နက် ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​သ​နည်း?
“​သင်​လို​အပ်​သ​လောက် ​အင်​တာ​နက်​ကို​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သည်” Telenor Broadband​နှင့်​အ​တူ ​သင်​ရွေး​ချယ်​ထား​သော ​မြန်​နှုန်း​ဖြင့် ​အင်​တာ​နက်​ကို ​သင်​ကြိုက်​သ​လောက် ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သည်။
Customer ​များ​အား​လုံး Wifi router​ရ​ရှိ​မည်​ဖြစ်​ပြီး၊ ​၎င်း​နှင့်​အ​တူ mobile ​ဖြင့်​လည်း​ကောင်း၊ ​ကွန်​ပြူ​တာ (​သို့) ​အ​ခြားdevice ​များ​သို့ ​ကြိုး​ဖြင့်​ချိတ်​ဆက်​ကာ ​အင်​တာ​နက်​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သည်။​ပါ​သည်။)
Users ​အ​များ​ကြီး ​တစ်​ပြိုင်​နက် ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သ​လား?
အ​​​သုံး​​​ပြု​​​နိုင်​​​ပါ​​​တယ်။ Telenor Broadband ​​​ဝန်​​​ဆောင်​​​မှု​​​များ​​​ကို ​​​မြန်​​​နှုန်း​​​အ​​​မျိုး​​​မျိုး​​​ကို ​​​ဈေး​​​နှုန်း​​​အ​​​မျိုး​​​မျိုး​​​ဖြင့်​​​ရ​​​၌​​ရှိ​​နိုင်​​​ပါ​​​ သည်။ ​​​ဝန်​​​ဆောင်​​​မှု​​​များ​​​အ​​​တွက် ​​​ဈေး​​​နှုန်း​​​အ​​​မျိုး​​​မျိုး​​​ရှိ​​​သော plan​​​ပေါ်​​​မူ​​​တည်​​​ပြီး ​​​အ​​​သုံး​​​ပြု​​​နိုင်​​​သော user​​​အ​​​ရေ​​​အ​​​တွက် ​​​ကွာ​​​ခြား​​​လိမ့်​​​မည်။
Telenor Broadband ​သည် ​အ​ခြား​သူ​များ​ထက် ​ပို​ဈေး​ကြီး​ပါ​သ​လား?
ဈေး​မ​ကြီး​ပါ၊ Telenor Broadband ​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​၏ ​ဈေး​နှုန်း​များ​မှာ ​ဈေး​ကွက်​အ​တွင်း ​ပြိုင်​ဘက်​များ​ထက် ၅​ဆ​မှ၁၀​ဆ​ထိ ​နည်း​ပါ​သည်။
ဝန်​ဆောင်​မှု​အ​တွက် ​နှစ်​စဉ်​ကြေး​ပေး​ဆောင်​ဖို့ ​လို​ပါ​သ​လား?
Telenor Broadband ​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​အ​တွက် ​နှစ်​စဉ်​ကြေး​ပေး​ဆောင်​ရန် ​မ​လို​ပါ။
တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​သည် ​မည်​သည့်​အ​မျိုး​အ​စား broadband ​ဝန်​ဆောင်​မှု​များ​ကို ​ပေး​လျက်​ရှိသ​လဲ?
တယ်​လီ​နော​မြန်​မာ​သည် ​သင့်​တင့်​မျှ​တ​သော​ဈေး​နှုန်း၊ ​စိုး​ရိမ်​ပူ​ပန်​မှု​ကင်း​သော၊ ​အ​နာ​ဂတ်​နည်း​ပ​ညာ​များ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ရန် ​အ​သင့်​ရှိ​နေ​သော broadband ​ဝန်​ဆောင်​မှု​ကို ​ပေး​နေ​ပါ​သည်။
အ​နာ​ဂတ်​နည်း​ပ​ညာ​များ​ကို ​အ​သုံး​ပြု​ရန် ​အ​သင့်​ရှိ​သ​ကဲ့​သို့ Telenor Broadband​သည် ​မြင့်​မား​သောquality​နှင့် ​ဝန်​ဆောင်​မှု​အ​တွက် ​မည်​ကဲ့​သို့ ​အာ​မ​ခံ​ပါ​သ​နည်း။
Telenor Broadband​ကို (၁)​ဂီ​ဂါ​ဘစ်​အ​ထိ ​မြန်​နှုန်း​ပေး​နိုင်​သော fiber​ဆက်​သွယ်​မှု​ကို ​တပ်​ဆင်​ထား​မည်​ဖြစ်​သည်။ ​ထို့​ကြောင့် quality ​နှင့် ​မြန်​နှုန်း​ကို Online​ပေါ်​တွင် ​တိုက်​ရိုက်​ဂိမ်း​က​စား​နိုင်​သော၊ TV​နှင့် ​ရုပ်​ရှင်​များ​တိုက်​ရိုက်​ကြည့်​ရှု​နိုင်​သည်​အ​ထိ ​ပေး​နိုင်​ကြောင်း​အာ​မ​ခံ​ပါ​သည်။
အင်​တာ​နက်​လိုင်း​က​ဘယ်​လို​မျိုး​တည်​ငြိမ်​မှု​ရှိ​ပါ​သ​လဲ၊ 2Mbps ​နှင့် 4Mbps​အ​တွက် user ​ဘယ်​လောက်​များ​များ ​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ရန် ​ထောက်​ပံ့​ပေး​ထား​သ​လဲ?
အင်​တာ​နက်​လိုင်း​က​အ​လွန်​တည်​ငြိမ်​မှု​ရှိ​ပြီး router​ဆီ​သို့ ​ရောက်​ရှိ​သော​မြန်​နှုန်း​မှာ​လည်း ​အ​မြဲ​တမ်း​တူ​ညီ​နေ​ပါ​လိမ့်​မည်။ user​အ​များ​ကြီး​က router​နှင့်​ချိတ်​ဆက်​ပြီး​အင်​တာ​နက်​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သည်၊ ​သို့​ရာ​တွင် user​အ​များ​ကြီး​တ​ပြိုင်​နက်​အ​သုံး​ပြု​မှု​သည် user ​တစ်​ ဦး​ချင်း​စီ​အ​တွက် ​အင်​တာ​နက်​အ​သုံး​ပြု​သည့် အ​တွေ့​အ​ကြုံ​အ​ပေါ် ​သက်​ရောက်​မှု​ရှိ​လိမ့်​မည်။ ​ဖိုက်​ဘာ​အင်​တာ​နက်​ဝန်​ဆောင်​မှု​နှင့်​ပတ်​သက်​၍ ​အ​တွေ့​အ​ကြုံ​ရ​ရှိ​ရန် ​သင်​ကိုယ်​တိုင် ​အ​ခ​မဲ့​အင်​တာ​နက်(၁)​လ​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ကို ​စမ်း​ကြည့်​ပါ။
ကန့်​သတ်​မဲ့ ​အ​သုံး​ပြု​နိင်​သော plan​မျိုး​ဟုတ်​ပါ​သ​လား?
ဟုတ်​ပါ​တယ်၊ ​ဒေ​တာ​ပ​မာ​ဏ​အ​ကန့်​အ​သတ်​မဲ့ ​စိတ်​ကြိုက်​အ​သုံး​ပြု​နိုင်​ပါ​သည်၊ ​သို.သော် ​အင်​တာ​နက်​အား​အ​ခြား​သူ​များ​သို့ share​သုံး​ခြင်း (​သို့) ​ပြန်​ရောင်း​ချ​ခြင်း​ကို ​လုံးဝ​ခွင့်​မ​ပြု​ပါ။
အင်​တာ​နက်​လိုင်း​ကျ​သွား​လျှင် ​ဆက်​သွယ်​မေး​မြန်း​ရန် customer service ​အား (၂၄/၇) ​ဝန်​ဆောင်​မှု​ပေး​ထား​ပါ​သ​လား?
အ​ကယ်​၍ ​အင်​တာ​နက်​ချွတ်​ယွင်း​မှု​အ​ချိန်​ကြာ​လျှင် ​နစ်​နာ​မှု​အား​ပြန်​လည်​လျော်​ပေး​ရန်​ရှိ​ပါ​သ​လား? ​အ​ချိန်​ကြာ​မြင့်​စွာ ​အင်​တာ​နက်​ချွတ်​ယွင်း​လျှင် customer ​များ​အ​တွ​က်​ဘာ​ပြန်​လုပ်​ပေး​မည်​နည်း?
အ​ကယ်​၍ ​အင်​တာ​နက်​ချွတ်​ယွင်း​မှု​ကြာ​ချိန်​သည် ​တစ်​ပတ်​ထက်​ကျော်​လွန်​သွား​လျှင် customer ​၏​နစ်​နာ​မှု​အား ​အ​လျော်​ပြန်​ပေး​ရန် ​အ​စီ​အ​စဉ်​ရှိ​ပါ​သည်။ ​အ​ခ​မဲ့​စမ်း​သပ်​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ကာ​လ​အ​ပြီး ​မှတ်​ပုံ​တင်​ရ​မည့် ​သုံး​စွဲ​သူ​သ​ဘော​တူ​ညီ​မှု​စာ​ချုပ်​တွင် ​အ​သေး​စိတ်​ဖော်​ပြ​ထား​ပါ​မည်။
အ​ခ​မဲ့(၁)​လ ​အ​စမ်း​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ပြီး​နောက် ​တပ်​ဆင်​ထား​သော ​ကိ​ရိ​ယာ​များ(router, ​ကေ​ဘယ်​ကြိုး)​အ​တွက် ​ငွေ​ပေး​ဖို့​လို​ပါ​သ​လား?
အ​စမ်း​အ​သုံး​ပြု​ခွင့်​ကာ​လ​ပြီး​နောက် custome​သည် ​ဝန်​ဆောင်​မှု​အ​တွက် ​စ​တင်​ငွေ​ပေး​ဆောင်​ရန် ​ရွေး​ချယ်​လိုက်​ပြီ​ဆို​လျှင် router​အ​တွက် ​ငွေ​ပေး​စ​ရာ​မ​လို​ပါ။ customer​သည် ​ဝန်​ဆောင်​မှု​အ​တွက် ​စ​တင်​ငွေ​ပေး​ဆောင်​ရန် ​မ​ရွေး​ချယ်​ဘူး​ဆို​လျှင် ​တယ်​လီ​နော​သည် router​အား​ပြန်​လည်​သိမ်း​ဆည်း​မည်​ဖြစ်​သည်။
သင်၏အိမ်(သို့)တိုက်ခန်းသို့ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သောကြောင့် ရွေ့ပြောင်းယူဆောင်သွားရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင်ရွေ့ပြောင်းသောနေရာသစ်သည် တယ်လီနောမှ သီးသန့်တပ်ဆင်ထားသော အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ယူထားပြီးသားဆိုလျှင် ゞင်းမှတစ်ဆင့် သင်သည် အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်ပြီးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပုံသေသတ်မှတ်ထားသော ဈေးနှုန်း၊ အမြဲတမ်းကောင်းမွန်သော အင်တာနက် connection… အတွေ့အကြုံရရှိရန် တစ်လလောက် အစမ်းသုံးကြည့်ပါ။